သင်္ကြန် | My Blog
သင်္ကြန်ဆိုတဲ့ စကားလုံးသည် ပါဠိစာမှဆင်းသက်လာခြင်းဖြစ်ပြီး ပုဒ်အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲကာ မြန်မာစာမှမွေးစားထားသော စာစုဖြစ်သည်။ သူ့အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ကာလများရွှေ့လျောခြင်းလို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်.. (ပြောင်းလဲလာပုံ အဆင့်ဆင့်ကိုတော့ ကိုးကားစရာမရှိလို့ မဖော်ပြတော့ပါဘူး) နှစ်ဟောင်းများကုန်ဆုံးပြီး နှစ်သစ်ဆီသို့ ပြောင်းလဲသွားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်.. နှစ်ဟောင်းများကုန်ဆုံးတယ်ဆိုတာ မကောင်းတာတွေကုန်သွားတယ်လို့မယူလိုက်ပါနဲ့.. နှစ်သစ်တွေတိုးလာတိုင်း တိုးလာတိုင်း သက္ကရာဇ်တွေကြီးလာတိုင်း ကြီးလာတိုင်း ကိုယ့် အသက်တွေလည်း လိုက်ကြီးရသလို ကျန်တဲ့သက်တမ်းတွေက နည်းနည်းသွားရတယ်ဆိုတာ အထင်အရှားမို့ အထွေအထူးတောင် ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး.. ကိုယ့်သက်တမ်းကနည်းနည်းသွားပြီး သေမယ့်ရက်နီးနီးလာတာကြောင့် နှစ်သစ်ကူးတိုင်းပျော်ဖို့ပဲ လုပ်မနေကြပါနဲ့..(ဒါကြောင့်သင်္ကြန်ဆိုတာ သေမင်းတမန်လို့ မနေ့ကပို့စ်မှာ ရေထားတာပေါ့) မသေခင် သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ရောက်လာပြီး ကိုယ်လုပ်စရာတွေ လုပ်နိုင်အောင်လို့ပေါ့.. ဒီလိုတွေးလဲဖြစ်ပါတယ်.. ဘ၀မှာ ကိုယ်လုပ်စရာတွေ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတွေကလည်း ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် ရှိကြမှာပဲ.. အဲဒီကိုယ်လုပ်စရာတွေကို မလုပ်သေးပဲ ရှေ့မှ နောက်မှ နဲ့ နေ့ရွှေ့ညရွှေ့လုပ်နေမယ်ဆိုရင် ကိုယ်လုပ်မယ့်အချိန်တွေ နည်းသွားပြီး ကိုယ့်ကိစ္စမပြီးမှာ စိုးတဲ့အတွက် ကိုယ့်ကိစ္စမပြီးသေးသူများက ဒီသေမင်းတမန်တွေကို ကြည့်ကြည့်ပြီးတော့ ကိုယ်လုပ်စရာတွေ မပြီးဆုံးသေးတာတွေကို မြန်မြန်ပြီးဆုံးအောင်လုပ်သင့်တယ်.. ဘယ်သူမဆိုကိုယ့်အတွေးနဲ့ကိုယ် ကိုယ်ဥာဏ်မှီသလောက် ကိုယ့်အတွက်တော့ ဘာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိကြပါတယ်.. တချို့ကြတော့ ဒီဘ၀ဒီလောကမှာ ချမ်းသာချင်တယ်. တချို့ကြတော့သံသရာချမ်းသာချင်ကြတယ်. တချို့ကြတော့ ချစ်တဲ့သူနဲ့ပေါင်းဆုံလိုကြတယ်.. စသဖြင့်အမျိုးမျိုးသော အတွေးအခေါ် အယူအဆတွေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာအလိုက် အခြားသောဘာသာဝင်တွေလည်း ထို့နည်းတူ သူ့အယူအဆနဲ့သူ ထုံးတမ်းစဉ်လာ ဓလေ့ပေါင်းစုံမပါမကျန် ကိုယ့်ရည်မှန်းချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်နေကြသူချည်းပါပဲ.. အဲဒီလို ဘယ်လိုပဲကွဲပြားကွဲပြား ကိုယ်ရည်မှန်းချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ဖို့ရာကတော့ အသက်ရှင်နေစဉ်အတွင်းမှာပဲ လုပ်နိုင်မှာပါ.. ဒါကြောင့် အချိန်လေးရှိတုန်းမှာ နေ၀င်လိုက် မိုးချုပ်လိုက်နဲ့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို မလုပ်ပဲ ကိုယ့်အချိန်တွေကို ဖြုန်းနေကြလို့ရှိရင်ဖြင့် နောက်ဆုံး သေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ့်ရည်မှန်းသလို ကိုယ့်ကိစ္စမပြီးပဲ ရှိနေကြလိမ့်မယ်..
ဒီ blog လေးက ကျွန်တော့အတွေး ကျွန်တော့်အမြင်တွေအတိုင်းဆောက်ထားတာဆိုတော့ ဒီသင်္ကြန်နဲ့ပက်သက်တဲ့အပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်မြင်သလိုပဲရေးထားတာပေါ့..အဲဒီတော့ ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာကို ကိုယ့်ကိစ္စပြီးအောင် မသေခင်မှာပြီးအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း ကျွန်တော့် အမြင်တွေပဲတင်ပြရမှာပဲ..
သင်္ကြန်ဆိုတာ ကာလတွေရွှေ့လျောပြီး ပြောင်းလဲတာလို့ အစပိုင်းမှာတင်ပြခဲ့တယ်.. အဲဒီကာလဆိုတာက အတိတ်ကာလ၊ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၊ အနာဂါတ်ကာလဆိုပြီးတော့ ကာလသုံးပိုင်းရှိတယ်.. ကျွန်တော်တို့ အခုရောက်နေတဲ့အပိုင်းကတော့ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ မှာရောက်နေတာပါ.. အခု ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ကအတိတ်ကာလက လာခဲ့ပြီး အနာဂါတ်ကာလသွားနေတာပေါ့.. အနာဂါတ်ကာလရောက်ရင် အခု ပစ္စုပ္ပန်ကာလ ကလည်း အတိတ်ကာလဖြစ်သွားပြန်ရော.. အဲဒီလို အတိတ်ကလာလိုက် ပစ္စုပ္ပန်ကာလရောက်လိုက် အနာဂါတ်ကာလကိုသွားလိုက်နဲ့ ကာလသုံးမျိုးက လှည့်နေရတယ်.. ကာလကသူ့ဟာနဲ့သူလှည့်နေရင်တော်ရဲ့.. အခုဟာက ကာလတွေကလှည့်တိုင်းလှည့်တိုင်း ကျွန်တော်တို့ကို အို အို သွားအောင်လုပ်ခဲ့တယ်.. ကာလက ကျွန်တော်တို့တွေကို စားနေတာပေါ့.. ၀ါးမျိုနေတာ.. ၀ါးမျိုတာများလေလေ ကျွန်တော်တို့ အသားအရေတွေရင့်ရော်လေလေ. ဆံတွေဖြူလေလေပေါ့.. သူကဘယ်လောက်တောင် ကိုယ့်ကို ၀ါးမျိုသလဲဆိုတော့ ဒီဘ၀ထဲမှာဆိုရင် ကိုယ့်အသက်နဲ့အမျှပဲ… ကိုယ့်မှာကလည်းဝါးမျိုခံစရာဆိုလို့ ဒီခန္ဓာပဲရှိတော့ ဒီကာလကလည်း ဒီခန္ဓာပဲ စက္ကန့်တွေ လှည့်နေတဲ့အမျှ ၀ါးမြိုစားသောက် ပွဲတော်တည်နေတာပေါ့.. သူကစားစရာ ကိုယ့်ခန္ဓာလည်းကုန်ရော တစ်ဘ၀တာကို ၀ါးမြိုတဲ့ တဲ့ကာလလက်ထဲလည်းအပ်လိုက်ပါရော ကိုယ့်ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ ကိုစွန့်ရတော့တာပဲ.. အတိတ်ဘ၀က၀ါးမြိုခံခဲ့ရပြီး ၀ါးမြိုစရာကုန်လို့ ဒီ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ကိုရောက်လာတာပဲ. ဒီ ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀ကိုလည်းသူက ကုန်အောင်ဝါးမြိုပြီးသွားရင်တော့ အနာဂါတ်ကာလကို လိုက်ပြီး ၀ါးမြိုဦးမှာပါပဲ.. ဥာဏ်ကလေးနဲ့ကြည့်ကြပါ.. အဲဒါကြောင့်သံသရာ တစ်လျှောက်လုံး ကျွန်တော်တို့တွေ ကာလရဲ့စားဖတ်ဝါးဖတ်ကနေ ဘယ်သောအခါမှ မလွတ်ခဲ့ဘူး. အခုချိန်ထိပဲ.. အခုလည်း ဒီလိုပဲ ဒီအချိန်ကာလကနေ လွတ်အောင်မလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင် အနာဂါတ်သံသရာထိ သူကလိုက်ပြီး ကိုယ့်ခန္ဓာကို စားသောက်ဝါးမြိုနေဦးမှာပဲ.. အဲဒီအချိန်တွေက ကိုယ့်ကို လိုက်စားပြီးသေခဲ့လို့ပဲ့ ကိုယ့်ကိစ္စက ဘယ်ဘ၀ကမှမပြီးခဲ့ဘူး. သေခါနီးမှာ ကိုယ်က လုပ်စရာကိစ္စတွေပြီးလို့ ဘာမှလုပ်စရာမကျန်တော့ပဲ စိတ်အေးလက်အေး သေခဲ့တဲ့ဘ၀ တစ်ဘ၀မှမပါခဲ့ဘူး.. ပါခဲ့ရင်လည်း အခုအချိန်ထိရောက်စရာလိုဘူး.. အခုချိန်ထိ ရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်း အရင်ဘ၀တွေက ကိစ္စမပြီးပဲသေခဲ့ကြတယ်ဆိုတာပေါ်လာတာပါပဲ.. ဘာလို့ ကိစ္စမပြီဘူးလို့ပြောလဲဆိုတော့ သေခါနီး ဟိုလူသတိရလိုက် ဒီလူစိတ်မချလိုက်. ပစ္စည်းနဲ့ မခွဲချင်လိုက်. ကောင်းတာတွေမလုပ်ခဲ့တာတွေသတိရလိုက် မကောင်းတာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေသတိရလိုက် နဲ့ မသေချင်ပဲသေခဲ့ရတဲ့ ဘ၀တွေကြီးပဲ.. ဘယ်တုန်းကမှလည်း ဒီကာလရဲ့စားဖတ်ဝါးဖတ်ကနေလွတ်အောင်လုပ်မယ် အသေလွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ကူးမျိုးလဲ မပေါ်ခဲ့ကြဘူး..စိတ်ကူးမပေါ်တော့ လွတ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းမပေါ်.. လွှတ်ချင်တဲ့စိတ်မှမရှိတော့ လွတ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတာ ဝေးပေါ့.. လွတ်တဲ့နေရာရှိတယ်လို့လည်းမသိ . မသိလို့လည်း လွှတ်အောင်မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့.. မလုပ်ခဲ့လို့လဲ မလွှတ်တာပေါ့..
ပြန်ပြီးချုံငုံသုံးသပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် တသံသရာလုံး ကာလရဲ့ အစားကိုခံခဲ့ရပြီး ဘ၀တိုင်း အသေဇာတ်ကြီးပဲ ခင်းခဲ့ကြရတယ်.. အသေမျိုးဟေ့ တို့သတ္တ၀ါလို့ ဆိုရမလိုတောင်ဖြစ်နေပြီ.. ဒီဘ၀လည်း အသေကမလွတ်သေး အသေဇာတ်ကခင်းခဲ့လို့ အခုအသေပွဲကနေရတာတောင် ကိုယ့်အဖြစ်ကို ကိုယ်မသိရင် နောင်ဘ၀ဘာဖြစ်ရပါလို၏လို့ ဆုတောင်းတာတွေက လာသေးတာပဲ.. ဒီဘ၀သေတာအားမရသေးလို့ နောက်ဘ၀ ကာလရဲ့ အစားကို ခံရပြီးသေရပါလို၏ ဆိုသလို ဖြစ်နေပြီ.. အသေဆုတောင်းတာကြနေတာပဲ.. ဒီဘ၀မကောင်းလို့ ကောင်းတဲ့ဘ၀ကိုတောင်းတယ်. ဒီဘ၀မလှလို့ လှတဲ့ဘ၀ကိုတောင်းတယ်.. ဒီဘ၀ ချစ်သူနဲ့မပေါင်းရလို့ နောင်ဘ၀ပေါင်းရဖို့ရာကို ဆုတောင်းကြတယ်.. နောင်တစ်ဘ၀ထဲတင်ကို မကသေးပါဘူး.. ဘ၀ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ပေါင်းရပါလို၏ ဆိုတာပါသေးတယ်.. တကယ်ပေါင်းရလား မပေါင်းရလားတော့မသိပါဘူး.. သေချာတာကတော့ ကာလရဲ့အစားခံရမှာကိုပဲ.. မထူးတော့ပါဘူး.. ဘ၀ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်း ကာလရဲ့အစားကိုခံရပါလို၏.. အသေဇာတ်က မလွတ်ရပါလို၏လို့သာ တောင်းလိုက်ပါတော့.. မဟုတ်လည်း ကိုယ်တောင်းသမျှထဲမှာ သူကပါနေမှာပဲ.. ရှိသေးတယ်… ဆုတောင်းရင်ဒီအတိုင်းတောင်းတာလားဆိုတော့ တောင်းတဲ့အခါ ဘုရားဆီမှာ သွားတောင်းတယ်.. ဘုရားကလည်း အို နာ သေ ဆိုတာမကောင်းဘူး ဒုက္ခသစ္စာ လွတ်အောင်လုပ်ကြလို့ သေသေချာချာမှာတယ်.. အသေလွတ်တာကိုကြိုက်တယ်. ကိုယ်ကလည်း တောင်းတာက အသေဆု.. တောင်းတော့လည်း ဘုရားဆီ.. ဘုရားကလည်းအသေကိုမကြိုက်.. အင်း.. ခက်တော့ခက်နေပြီ.. ဒါတောင် ဒီအသေဆုမပြည့်မှာစိုးလို့ဆိုပြီး ဆုတောင်းပြည့်ကို ပြေးရသေးတယ်.. မလွတ်တာလည်းမပြောနဲ့.. နောင်ဘ၀လို့ ဘ၀ပါနေရင် အသေပါတာပဲလို့ မှတ်ထားလိုက်.. ဘ၀ကိုတောင်းရင် အသေကိုတောင်းတာပဲ..
အဲဒီတော့ ဒီဘ၀ဆိုတဲ့ အသေကနေလွတ်အောင် တနည်းအားဖြင့် အချိန်တွေ ကာလတွေရဲ့ အစားကနေလွတ်အေင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ..
ဆိုကြပါစို့… အခု တသံသရာလုံး ကာလရဲ့စားဖတ်ဝါးဖတ်ကနေ မလွတ်တာက ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစားခံနေရတာ သေပဲသေနေရတာလို့ မသိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ.. အဲလို သေပဲသေနေရတာလို့ မသိတဲ့အတွက် ဟိုဘ၀ရရင်ပဲကောင်းနိုးနိုး ဒီဘ၀ရရင်ပဲကောင်းနိုးနိုး နဲ့ အဲဒီဘ၀တွေကို လိုချင် တပ်မက်ပြီးတော့ ရအောင်လုပ်နေလို့.. အဲဒီဘ၀တွေပဲရ ရနေတာ.. တနည်းအားဖြင့် သေပဲသေနေရတာ.. အဲဒီလို ကိုယ်က သေပဲသေနေရတယ် မွေးလိုက် အိုလိုက် သေလိုက် နဲ့ ဘ၀တိုင်း ဘယ်ဘ၀ရရ သေရတဲ့အဖြစ်ကို မကြိုက်တဲ့အခါကြမှ နောင်ဘ၀လိုချင်နှစ်သက်မှုတွေက မလာမှာ.. အဲဒီလို နောင်ဘ၀လိုချင်နှစ်သက်မှုတွေ မလာတဲ့အခါကြတော့မှ နောင်ဘ၀ရအောင်အားထုတ်မှုတွေ မလုပ်တော့ဘူး.. နောင်ဘ၀ရအောင်အားထုတ်မှုမှမရှိတော့ နောင်ဘ၀ က လာစရာမရှိတော့ဘူးပေါ့.. အဲ့ဒီနောင်ဘ၀ ဆိုတဲ့ ဘ၀က လာစရာမရှိ ရင် ဘ၀နဲ့အတူပါလာမယ့် အသေကလည်း မရှိတော့ဘူးပေါ့.. အသေကနေလွတ်ပြီပေါ့.. ကာလလက်ကနေ လွတ်မြောက်သွားပြီပေါ့..
အဲဒီတော့ အချုပ်က ကိုယ်က ကာလရဲ့အစားပဲခံနေရတာ ခဏခဏသေနေရတဲ့အဖြစ်ကို သိတဲ့အခါကျတော့မှ အသေလိုချင်တဲ့ တဏှာချုပ်မှာ.. အဲဒီ အသေလိုချင်တဲ့တဏှာနဲ့အတူ သေရတဲ့အဖြစ်ကမကောင်းတာကို ကောင်းအောင်လုပ်ထား တဲ့ အ၀ိဇ္ဖာပါတွဲ ပြုတ်သွားတယ်… အဲဒီ အသေကိုရအောင် လုပ်တဲ့ အ၀ိဇ္ဖာနဲ့တဏှာ မရှိတော့ဘူး ဆိုမှတော့ နောင် သေရမယ့် ဘ၀လည်းလာစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့.. အဲဒီလို ခဏခဏသေနေရတာက မကောင်းဘူး.. အဲဒီမကောင်းတဲ့ သေတတ်တဲ့ခန္ဓာက ဒုက္ခသစ္စာ၊ အဲဒီ မကောင်းတဲ့ ခန္ဓာ ဒုက္ခသစ္စာကို မကောင်းဘူးလို့ သိတဲ့ ဥာဏ်က မဂ္ဂသစ္စာ၊ အဲဒီမကောင်းဘူးဆိုတဲ ဒုက္ခသစ္စာကို သိတဲ့ မဂ္ဂသစ္စာနဲ့လည်း မကောင်းဘူးလို့ သိလိုက်ပါရော ကောင်းတယ်လို့ လိမ်ထားတဲ့ အ၀ိဇ္ဖာနဲ့ .. အ၀ိဇ္ဖာကလိမ်ထားလို့ အဲဒီမကောင်းတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာကို ကြိုက်တဲ့တဏှာ ဆိုတဲ့ သမုဒယသစ္စာ က လာခွင့်မရပဲ ချုပ်သွားတယ်.. အဲဒီ တဏှာ သမုဒယသစ္စာမှ ချုပ်တော့ နောင် ခန္ဓာ၊ သေတတ်တဲ့ ဒုက္ခသစ္စာ မလာပဲ အသေကလွတ်သွားတာက နိရောဓသစ္စာ.. ဆိုပြီး သစ္စာလေးချက်လည်း ကိုယ့်ဥာဏ်ထဲမှာ တစ်ပြိုင်နက်ဆိုက်ပါရော အသေကလွတ်တဲ့အဖြစ်ကို ရောက်သွားတော့တာပဲ.. သစ္စဥာဏ် ကိစ္စဥာဏ် ကတဥာဏ် ဆိုပြီး သူ့အဆင့်နဲ့သူ သစ္စာဆိုက်သွားတဲ့အခါ ပထမတစ်ခါဆိုက်ရင် သောတာပန်.. အပါယ်မှာသေရတဲ့အဖြစ်ကနေအပြီးတိုင်လွတ်ပြီ… ဒုတိယတစ်ကြိမ်ဆိုက်ရင် တကဒါဂါမ်.. တတိယတစ်ကြိမ်ဆိုက်ရင် အနာဂါမ်.. နဲ့.. စတုတ္ထတစ်ကြိမ်ဆိုက်ရင် ရဟန္တာ.. အဲဒီ လေးကြိမ်လေးခါလည်းဆိုက်ပါရော အသေဇာတ်သိမ်းပြီ.. နောင်သေစရာကုန်ပြီ.. ပြုဖွယ်ကိစ္စတွေ အကုန်ပြုပြီးသွားပြီ. သူ့ကိစ္စအကုန်ပြီးပြီလို့ဆိုတာပါပဲ.. ကာလ၀ိမုတ္တိဖြစ်သွားပြီ…ကာလကနေလွတ်မြောက်သွားပြီ..ကာလရဲ့အစားခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်သွားပြီ..
အဲဒီကာလရဲ့အစားခံရခြင်းမှ လွတ်မြောက်သွားတယ်ဆိုတာက ကိုယ်က အချိန်ရဲ့အစားကိုမခံပဲ အချိန်ကိုပြန်စားလိုက်လို့သာ လွတ်မြောက်သွားတာ.. ဘယ်လိုပြန်စားတာလဲဆိုတော့ အထက်မှာပြထားသလို နားလည်သဘောပေါက်လို့ မလိုချင်ဘူးဆိုရုံနဲ့တော့မရသေးဘူး.. သူက သစ္စဥာဏ်အဆင့်ပဲရှိသေးတာ.. အဲဒီသစ္စဥာဏ်ရပြီဆိုမှ တဆင့်တက်ပြီး ကိုယ့်ခန္ဓာကို ကိုယ်လှည့်သုံးသပ်ကြည့်လိုက် တဖျပ်ဖျပ်နဲ့ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ဘော.. ခဏခဏ ပေါ်ပြီးပျောက်သွားသဘောလေးတွေကို ဥာဏ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မှ ကိုယ့်ခန္ဓာက ကာလအစားခံနေရလို့ ခဏခဏ ဖြစ်ပျက်ပြောင်းလဲနေတယ်ဆိုတာ သူများပြောလားမှတ်တယ်.. အခုတော့ ကိုယ်တိုင်မြင်တာပါလား.. အဲဒီခဏခဏ ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတာက ဘာမှ အနှစ်သာရမရှိတဲ့ ဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားလို့ ကိုယ့်ရုပ်နာမ်အပေါ် မြင်လာရင်တော့ ကိစ္စဥာဏ်ရောက်ပြီ.. (မှတ်ချက်။ ရုပ်နာမ်ကို ပရမတ်ကျကျမသိသေးရင်တော့ ရုပ်နာမ်ပေါ် ပညတ်၊ပရမတ် ကွဲအောင် ခွဲပြနိုင်တဲ့ဆရာအရင်ရှာဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်) အဲဒီလို ကြည့်လိုက်တိုင်း ကြည့်လိုက်တိုင်း ဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ဒုက္ခလေးတွေပဲ တွေ့ပါများလာတဲ့အခါကျတော့ ဒီဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ သဘောလေးတွေက ဒုက္ခသစ္စာအစစ်ပဲ မလိုချင်တော့ပါဘူး မကြည့်ချင်တော့ပါဘူးလို့လဲ ဖြစ်လာပါရော သူက ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာ ကြည့်နေရာကနေ မဖြစ်မပျက်တဲ့ နိရောဓဆိုတဲ့ နိဗ္ဗာန်ဖက်လှည့်သွားတဲ့ ကတဥာဏ်ဆိုက်တော့တာပါပဲ.. အဲဒီကတဥာဏ်လည်းဆိုက်ရော အသေလွတ်တဲ့နေရာကိုရောက်တော့တာပါပဲ.. လေးကြိမ်လေးခါဆိုက်ရင်တော့ အသေက အပြီးတိုင်လွတ်တာကြောင့်မို့လို့ ဒီအသေလွတ်အောင် ကိုယ့်ခန္ဓာ ဖြစ်ပျက်ကို စောင့်ကြည့်တဲ့အလုပ်ကိဖြစ်တဲ့ ၀ိပဿနာအလုပ်ကို လုပ်ကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်.. ဒီဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတဲ့ မဂ္ဂင်အလုပ်ကမှ အသေလွတ်နိုင်တာမို့ ကိုယ်က ၀ိပဿနာရှုတိုင်းရှုတိုင်း အသေလွတ်ရာကို တဖြည်းဖြည်းသွားနေတဲ့အတွက် သူက အချိန်တွေကို ပြန်စားနေတာပဲ.. ကိုယ်က အဲဒီအချိန်ဆိုတဲ့ကာလကို ကိုယ်ကအပြီးတိုင်စားလို့လဲ ကုန်ပါရော အသေလွတ်တဲ့နိဗ္ဗာန် ကာလသုံးပါးကလွတ်မြောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကို ရောက်နိုင်တော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်.. ကိုယ်ကသူ့ကို မစားရင်တော့ သူကကိုယ့်ကို စားတော့မှာ. အဲဒီတော့ သူစားလို့မကုန်ခင် ကိုယ်ကအရင်ဦးအောင် အချိန်ကိုစားတယ်ဆိုတဲ့ ၀ိပဿနာအလုပ် အားသွန်ခွန်စိုက် လုပ်ကြဖို့ တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်…
Categories : သင်္ကြန်, အချိန်ကိုပြန်စားခြင်း
သင်္ကြန် သို့မဟုတ် သေမင်းတမန်
သင်္ကြန်ရောက်ပြန်ပြီ… သင်္ကြန်ဆိုတာက ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် နှစ်စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ပွဲတော်တစ်ခုပါ.. သင်္ကြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ ပိတောက်တွေလည်းပွင့်ရတယ်.. လူတိုင်းမှာလည်း သင်္ကြန်နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ ကိုယ်စီခံစားချက်လေးတွေနဲ့ ကိုယ်စီအတွေးလေးတွေနဲ့… သင်္ကြန်ရောက်ရင်တော့ဘာလုပ်မယ် ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတာ တွေးတဲ့သူတွေလည်းတွေးကြမယ်.. အစီအစဉ်တွေလည်းဆွဲကြမယ်.. သင်္ကြန်ရဲ့သရုပ်ကိုတော့ သူတို့တွေ ဖော်ကြူးကြမယ်လေ.. အရေးမလုပ်အားတဲ့သူတွေလည်း တပုံကြီးပါပဲ.. အရေးလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် မလုပ်တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် သင်္ကြန်ကိုတော့ သေချာပေါက် သူတို့ကျော်ဖြတ်ကြရမှာပဲ.. အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိကျော်ဖြတ်မယ် မကျော်ဖြတ်မယ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်အတွေး ကိုယ်ခံယူတဲ့အပေါ်မှာပဲမူတည်တယ်လေ.. ဘယ်သူက ဘယ်လိုလုပ်မှ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ်ဆိုတာကတော့ ခေတ်ကာလကပြောင်းလဲလာတော့ အတပ်ပြောရခက်တယ်.. သူ့အတွေးနဲ့သူကတော့ မှန်နေတာပဲ.. သေချာပေါက်ကတော့ သင်္ကြန်ကိုလွန်ဆန်လို့မရတာပဲ..
ဘာလို့သင်္ကြန်ကိုလွန်ဆန်လို့မရတာလဲဆိုတော့ နည်းနည်းရှင်းလိုက်ရင်ပေါ်လာမှာပါ.. သင်္ကြန်ဆိုတာက နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးပြီး နှစ်သစ်ပြောင်းခြင်းဖြစ်တာကြောင့် သူ့ကိုလက်ခံသည်ဖြစ်စေ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ တစ်နှစ်ကတော့ ဟောင်းရတော့မှာပါ… နှစ်သစ်ကူးတယ်လို့လည်း ပြောရင်ပြော.. နှစ်ဟောင်းမကုန်ပဲနဲ့လည်း နှစ်သစ်ကမကူးပါဘူး.. နှစ်ဟောင်းကုန်ပြီး နှစ်သစ်ကူးတာက သူ့ကိုကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ သူကတော့ ကုန်ရမှာပဲ.. ဒါကြောင့်သူ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပါ… ကျွန်တော်တို့က သင်္ကြန်ကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ပဲလို့ ယူဆထားသလို တခြားတိုင်းတပါး လူမျိုးခြားတွေကလည် သူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့ တွက်ထားကြတယ်… ဒီသင်္ကြန် ဆိုတဲ့ နှစ်ဟောင်းကုန်ဆုံးမှု တနည်း တစ်နှစ်ကုန်ဆုံးမှု ဆိုတာကြီးကတော့ လူတိုင်းကို သူနဲ့ပက်သက်ထားတယ်.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်နှစ်ကုန်တာဟာ ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမှ တစ်နှစ်ကုန်တာမဟုတ်ပါဘူး.. တနည်း တစ်နှစ် အသက်ကြီးလာတာမဟုတ်ပါဘူး… ဘယ်သူမဆို တစ်နှစ်ကုန်တိုင်း တစ်နှစ်ကုန်တိုင်း တစ်နှစ်အသက်ကြီးရတော့တာပါ… ဒါကြောင့်သူက လူတိုင်းကို သူနဲ့ပက်သက်ထားတယ်.. လူတိုင်းက သူနဲ့ပက်သက်နေရတယ်..
သင်္ကြန်ကို ပွဲတော်တွေလုပ်ပြီးပဲနွှဲနွှဲ ရေတွေသွန်းလောင်းပြီးတော့ပဲ ကျင်းပကျင်းပ .. အို.ကုန်ကုန် ကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ပြီးပဲ သူ့ကို ကျော်ဖြတ်ကျော်ဖြတ်..နောက်ဆုံးတော့ တစ်နှစ်ကြီးရတာပါပဲ.. (ရေးရင်းနဲ့ပဲ သေခြင်းတရားဖက်ရောက်လာသလား မပြောတတ်ပါဘူး.. ရေးလက်စနဲ့တော့ မထူးတော့ပါဘူး..ဆက်လိုက်တော့မယ်) သေချာတွေးကြည့်လိုက်တော့ ကိုယ်ကသင်္ကြန်ကိုနွှဲရမလားအောက်မေ့တယ်.. တကယ်တမ်းကျတော့ သူကကိုယ့်ကို နွှဲသွားတာကိုး… ဒါကြောင့် သူများအသက်မေးတဲ့အခါ အရင်နှစ်ကထက် တစ်နှစ်ကြီးပြီးပြောရတယ်.. သင်္ကြန် လက်ချက်တွေလေ.. မြန်မာလူမျိုးတွေကသာ သင်္ကြန်ကိုနွှဲတာ သင်္ကြန်ကတော့ လူတိုင်းကို နွှဲသွားတယ်… ဒါကြောင့်လူတိုင်း ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့် အရင်နှစ်ကလိုမျိုးရုပ်တွေရှိသေးလားလို့… ငယ်ရုပ်လေးတွေ ပျောက်ပျောက်ကုန်တယ်.. ပြင်းတယ်နော်သင်္ကြန် လက်ချက်… သူကကိုယ့်ကို မညှာမတာနွှဲနေမှန်းမသိတော့ ကိုယ်က သူ့ကို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလေးလုပ်ပေးပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုနွှဲပွဲလေးကို အားပေးနေသလိုဖြစ်နေပြီ… ကျွန်တော်တို့တွေကသာ သင်္ကြန်ကဘယ်သူတွေနဲ့သာဆိုင်တယ်ဆိုပေမယ့် သူကတော့ သူ့ကို သိတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် မသိတဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် မခွဲခြားဘူး.. အကုန်လုံးကို ကြီးအောင်လုပ်ပြစ်လိုက်တယ်.. အော်..နောက်ဆုံးတော့ သင်္ကြန်ဆိုတာ သက္ကရာဇ်ကြီးအောင်လုပ်တတ်သူပါလား..
သက္ကရာဇ်ကြီးလာတယ်ဆိုတာ ဂဏာန်းအရတိုးလာတာသက်သက်ပဲလို့မယူလိုက်ပါနဲ့.. ကိုယ့်ဂဏာန်းကြီးလာတာဟာ ကိုယ့်ကျန်တဲ့သက်တမ်းသေးသွားတာပါ. သေတော့မယ်လို့ပြောတာ.. အရင်နှစ်ကထက်စာရင် ဒီနှစ်က သေဖို့တစ်နှစ်နီးသွားတာပေါ့.. ဟုတ်တယ်နော်.. သိပြီးသားတွေပါ.. ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရင်တော့ သိပါတယ်.. တခါလေကျတော့ မေ့တာတာပေါ့. ဟုတ်တယ်မလား.. ကျွန်တော်တို့တွေက အဲလို တစ်နှစ်သေဖို့နှီးလာတယ်ဆိုတာကို တခါတလေ အလုပ်များလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် စား၊ ၀တ်၊ နေ ရေးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်.. ချစ်ကြောင်း မုန်းကြောင်းပဲဖြစ်ဖြစ် မေ့မေ့နေကျတယ်လေ.. အဲလိုမေ့မေ့နေတာ ဘာနဲ့တူသလဲဆိုတော့ (ကျွန်တော့ ဆရာသမားတွေပြောတာ ကြားဖူးတာလေးပြန်ပြောမယ်) တီကောင်တွေက မျက်စိမပါလို့သူက မမြင်ရပါဘူး. မမြင်ရတဲ့အခါကျတော သူကရှေ့မှာဘာရှိတယ်ဆိုတာကို သူကမသိဘူး.. မသိတဲ့အခါကျတော့ သူကလည်း စား၊၀တ်၊နေ ရေးအတွက် အစာရှာရတယ်.. သူကမြေဆီ မြေနှစ်လေးတွေကို စားလိုက် ရှေ့တိုးသွားလိုက်နဲ့ပေါ့.. အဲဒီလိုပဲ ကြက်ကလေးတွေကလည်း အစာရှာရှာထွက်လာတယ်.. သူတို့လည်း မြေကြီးလေးတွေကို ယှက်လိုက် အစာရှာစားလိုက်နဲ့ ရှေ့တိုးတိုးလာတာပေါ့.. တီကောင်ဆိုတာက ကြက်တွေရဲ့အစာပါပဲ.. ဆိုတော့. တီကောင်လေးတွေက မမြင်ရလို့ သူ့သေမင်းတမန် ဆိုတဲ့ ကြက်ကလေးတွေ သူ့ဆီလာနေတာလည်းမသိတော့ မြေကြီးလေးစားကာ စားကာနဲ့ ပဲ ရှေ့ဆက်တိုးလာတာပေါ.. ဘာလို့ လို့ပြောလည်းဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့တွေ စားချင်တာစား လိုချင်တာများရလို့ရှိရင် ပျော်မလား မပျော်ဘူးလားဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါ.. အဲဒီလိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ စားလိုက် ရှေ့တိုးလိုက်နဲ့.. သူကရှေ့တစ်လှမ်းတိုလေ သူ့သေမင်းနဲ့တစ်လှမ်းနီးလေပဲ.. ဒါကို သူကမမြင်ရလို့ မသိဘူးပေါ့. မသိလို့လည်းပဲ ပျော်နိုင်တာပေါ့.. သူကမတိုးလည်း သူ့သေမင်းတမန်ကတော့ တိုးလားမှာပဲ.. နောက်ဆုံး သူ့သေမင်းတမန်ရှေ့ကို လည်းရောက်ရော ကြက်ရဲ့စားဖတ်ဝါးဖတ်အဖြစ်ရောက်ရတော့တာပဲ..
အဲဒီတီကောင်လိုပဲ ကျွန်တော်တို့တွေက စီးပွားလေးရှာလိုက် အပန်းလေးဖြေလိုက်နဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ပဲ ဘ၀ကို ကျော်ဖြတ်လာကြတယ်..ကျွန်တော်တို့သေမင်းတမန်က တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ် ကိုယ့်ဆီတိုးတိုးလားနေတယ်ဆိုတာကို မသိဘူး.. သိရင်လည်းနှလုံးမသွင်းဖြစ်တဲ့အခါ မေ့နေတာပေါ့.. အဲဒီလိုမေ့နေတဲ့အခါ တီကောင်လိုပဲဖြစ်နေပြီ.. မေ့တော့ ပျော်ပျော်နေနိုင်တာပေါ့. မနက်ဖြန်သေမယ်လို့သိရင် ဘယ်သူမှ ပျော်မှာမဟုတ်ပါဘူး.. သန်ဘက်ခါတွက်ဆိုပြီးတော့လည်း အစီအစဉ်တွေရှိတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး.. မသိလို့သာ အနာဂါတ်အတွက် အစီအစဉ်တွေ အများကြီးချပြီး အဲဒီအတိုင်းအရောက်သွားမယ်ပေါ့.. ကိုယ်ကအဲ့လို plan တွေလုပ်သာ လုပ်နေတယ် အသက်ကတော့ တဖြည်းဖြည်းကြီးကြီးလားပြီးတော့ သေမင်းဆီကို အရောက်သွားနေတယ်.. သေမင်းကလည်း ငါမင်းတို့အတွက်လာပြီလို့ နှစ်တွေကြီးကြီးပြ ပြီး ကိုယ့်ဆီအရောက်လာနေတာပဲ.. ကိုယ်ကလည်းပျော်ပျော်ပါးပါး ရှေ့တိုးလိုက် သေမင်းကလည်း သတ်မလို့ရှေ့တိုးလာလိုက်ပေါ့… တီကောင်နဲ့ ကြက်လိုပဲ.. တကယ်တော့ နှစ်တွေကြီးပြတယ်ဆိုတာ သေမင်းက သူမရောက်သေးခင် သေမင်းတမန်အရင်လွှတ်လိုက်တာပဲ.. ဒါကိုကိုယ်က မသိပဲပျော်နေတယ်ဆိုတော့ မသိပျော် ပျော်ပဲတဲ့.. (ဆရာသမားတွေပြောတာ) တီကောင်လိုပဲ မသိပျော်ပဲပေါ့..တီကောင်ကတော့ ထားတော့ သူကမမြင်ရလို့ ကိုယ့်သေမင်းကိုယ့်ဆီလာနေတာမသိတာ.. အခုဟာက ရက်စွဲတွေရေးတိုင်းရေးတိုင်း ခုနှစ်တွေတိုးတိုးပြီး ကိုယ်တိုင်ရေးနေရတာ.. ဒါကိုလဲ သေမင်းတမန်လို့ ဘယ်သူသုံးသပ်မိလဲမသိဘူး..သုံးသပ်မိတဲ့သူကတော့ အနည်းစုလောက်ပဲဖြစ်မှာပါ.. သေမင်းကသူမလာခင် အရင်ရှေ့က ရှေ့ပြေး သေမင်းတမန်ကို အရင်လွှတ်လိုက်ပါရဲ့နဲ့ မသိဘူးဆိုတာတော့ တီကောင်ထက် နည်းနည်း ပိုမဆိုးဘူးလား.. (နည်းနည်းလို့ပဲရေးတာ တကယ်ဆို အများကြီးလို့ရေးသင့်တာ) ဘာဆင်ခြေတွေများရှိနေလို့ မေ့နေကြတာလဲ.. စီးပွားရေးအဆင်မပြေလို့လား. နိုင်ငံရေးကြောင့်လား. ချစ်တဲ့သူတွေကြောင့်ပဲလား.. ဘာအကြောင်းကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အချိန်တန်ရင်ကိုယ်က သူ့ရှေ့ရောက်ရတော့မှာပဲ..
ဒါကြောင့် သင်္ကြန်ဆိုတာ ဂဏာန်းတွေတိုးပြပြီးတော့ ကိုယ့်ကို တစ်နှစ်ကြီးလာပြီဆိုတာ သတိပေးတဲ့အနေနဲ့ ရောက်လာတဲ့ သေမင်းတမန်ပေါ့.. အဲဒီအချိန်ကာလတွေက ကိုယ့်ကို တဖြည်းဖြည်း ၀ါးမျိုးလာပြီးတော့ ၀ါးမျိုးစရာလည်းကုန်ရော သေရတော့တာပါပဲ.. အဲဒီကိုယ့်ကိုမသေ သေအောင်သတ်ပွဲကိုတော့ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေနဲ့ အားပေးနေတာတော့ သိပ်မကောင်းပါဘူး. တီကောင်အဖြစ်ထက်ဆိုးနေမယ်.. အဲဒီတီကောင်ဆိုတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ထက် မဆိုးအောင် သင်္ကြန် ရောက်လာပြီဆိုတိုင်း ဆိုတိုင်း ရက်စွဲတွေရေးတိုင်းရေးတိုင်း ကိုယ့်ကို တဖြည်းဖြည်း ၀ါးမျိုနေတယ် ဆိုတာလေးတော့ သတိရကြပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ချင်ပါတယ်…. (ဆက်ရန်)
Tags: သင်္ကြန်, သေမင်းတမန်
Categories : သင်္ကြန်